Nolasha Real Madrid oo Dib usoo Laabatay Kaddib Bahdilkii Camp Nou – Gool FM
Nolasha Real Madrid oo Dib usoo Laabatay Kaddib Bahdilkii Camp Nou
( Madrid ) 13 Nof 2018. Real Madrid ayaa kusoo laabatay wadada guusha kaddib kulamo natiijo xuma ah oo ay kooxdu gashay dhawaan.
Madrid waxay aheyd mid si wanaagsan ku bilaabaty kal cayaareedkan kumadadii ugu horreeyay uu maamulayay Julen Lopetegui, laakiin kooxda ayaa habac gashay ilaa ugu dambeyn uu xil kiisa waayay macalinka reer Spain.
Lix kulan xariira ayay Los Blancos weysay guul iyadoo afar kamida kulamadaa guuldarreystay waxaana kamida qasaarooyinka soo gaaray Bahdilkii lagu xasuuqay garoonka Camp Nou oo loogu badiyay 5-1 cayaartii Classico.
Laakiin maamulka kooxda ayaa ugu dambeyn xilka kooxda si ku meel gaara ugu magcaabay Santiago Solari kaa oo u muuqda mid dib ugu soo celiyay kooxda hanaan wanaagsan.
Kulamada uu ilaa hadda maamulay wuxuu gaaray guulo xariira waana afar cayaar waxayna kala sareyna horyaalka ku jiraan kaalinta lixaad inkastoo hogaanka uu u jiro 4-dhibcood kaliya.
Cayaariyahanada kooxda ayaa dhankooda ah kuwa aad ugu niyadsan maamulahan waxaana kamida xiddigaha sida wanaagsan u shaqeeyay kabtanka Kooxda Sergio Ramos iyo Karim Benzema kuwaa oo dhaliyay goolo muhiima kulankii kooxda ay guusha weyn kaga adkaatay Celta Vigo 4-2 Axadii.
Solari haatan si rasmiya ayaa loogu magacaabay xilka tababare ee kooxda wuxuuna sido kale guulestay labadii kulan ee koobka Champions League uu naadiga leyliyay.
Pep Guardiola oo Ganaax wajahaya kaddib Hadal uu ka yiri Garsoorihii Kulanka Manchester derby
Pep Guardiola oo war fiican ka helaya xaalada dhaawac ee Kevin De Bruyne